War deg deg ah:Burcad badeeda Somalida oo markab siidayey ka dib $ 6 milyan oo …. – SBC
War deg deg ah:Burcad badeeda Somalida oo markab siidayey ka dib $ 6 milyan oo ….
Kooxaha burcad badeeda Soomaalida ayaa siidaayey saacadihii la soo dhaafay markab xamuulka qaada oo laga leeyahay wadanka Gariiga ka dib markii ay qaateen lacag madaxfurasho ah oo gaaraysa 6 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Markabkan oo lagu magacaabo MV Eagle ayaa kooxaha shufto badeeda Soomaalidu qabsadeen bishii January ee sanadkan iyagoo ka soo qabsadey xeebaha Koonfur Bari ee wadanka Oman waxaana saaran 24 shaqaale ah oo dhamaantood u dhashay wadanka Filipiin, kuwaasi oo iyagana la siidaayey.
“Markabka MV Eagle hada waa la siidaayey oo waa xor, sidoo kale 24-kii shaqaalaha Filipiniyiintuna waa ay bad qabaan dhamaantood” sidaasi waxaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters Andrew Mwangura, oo ah sarkaal la socda arimaha badbaada badmaaxiinta & gaadiidka badda isla markaana qaabilsan arimaha xeebaha Soomaaliya. Burcad badeeda ayaa sheegtey inay qaateen lix milyan oo doolar oo madaxfurasho ah laakiin ma jirto cid madaxbanaan oo xaqiijinaysa warkan. Markabka ayaa la siidaayey shaley galinkii dambe sida ay xaqiijiyeen kooxaha burcad badeeda ee ay hastey.“Waxaynu qaadanay 6 milyan oo doolar, markabkuna wuxuu hada bilaabay in uu dhaqaaqo uuna ka baxo deegaankayaga” ayuu yiri nin magaciisa ku soo koobay Kalif oo u hadley burcad badeeda kaasi oo sheegay in uu ku sugan yahay xeebta Ceel Dhanaane.
Apriil 24, 2011 at 10:43 am
cajiibul cajaaib ereyga soomaali iyo erayga burcad waxay noqdeen mataano qarniga 21aad ee aduunku hormar lamataanoobay
allow adaa noo maqan
Apriil 24, 2011 at 8:25 pm
waa arin la yaab noqotey mwangura weli ma u hadlayaa burcad badeeda maxaa qolyaha raadiya burcad badeeda u qaban waayeen mwangura,halka ay lee yihiin niman baa u kala turjuma iyaga iyo laheystayaasha.